आफ्नै बिहेको कार्ड बाड्न नेपाल आएका भारतीय युवाको हत्यामा संलग्न दुई भारतीय पक्राउ - राष्ट्रखबर
राष्ट्र आफ्नै बिहेको कार्ड बाड्न नेपाल आएका भारतीय युवाको हत्यामा संलग्न दुई भारतीय पक्राउ
February 23, 2018 rastrakhabar 0
व्यापार र केटीसँगको सम्बन्धको निहुँमा आफ्नै साथीको हत्या गर्ने दुई भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत विहारका २५ वर्षीय सन्तोष गुप्ता र २४ वर्षीय राहुल पटेल रहेका छन् । उनीहरुले गत फागुन ३ गते भारतको विहार रक्सौल बस्ने २२ वर्षीय मनिष कुमार नारायाणको घाँटी रेटी हत्या गरेका थिए ।
गत फागुन ४ गते बिहान बाराको परवानिपुर गाउँपालिका वडा नं . ५ बहुवरी टोल स्थित पुर्वी–पश्चिम गण्डक नहरको सडक किनारमा वेवारिसे शव फेला परेको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त शव भारत विहार रक्सौल न.पा.वडा नं. १० काली मन्दिर रोड बस्ने प्रमोद कुमारका छोरा मनिषको भएको परिवारले सनाखत गरेको थियो ।
प्रहरीले यसबारे अनुसन्धान गर्दा मनिषलाई सन्तोष गुप्ता र राहुल पटेल समेतको योजना र संलग्नतामा घाटी रेटी कर्तव्य गरी मारी फालेको खुलेको थियो । उनीहरुलाई नेपाल भारत र पर्सा जिल्लाको सिमावर्तित एरियामा पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार मृतक मनिष कुमारको विहे फागुन ११ गते भारतको घोडासहन भन्ने ठाउँमा हुने तय भएको थियो ।
गत फागुन ३ गते विहान मनिषको घरमा गई प्रतिवादी राहुल पटेल र सन्तोष गुप्ताले करिब ३ घण्टा सम्म कुराकानी गरी बिरगंज जानको लागी दवाव दिएका थिए । विहेको कार्ड बाँड्न जाउँ भन्दै दुई जनाले मनिषलार्ई फकाई बिरगञ्ज ल्याई चंडाल चोकमा अत्याधिक मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गराएका थिए । त्यसपछि दुई जनासहित अन्य फरार प्रतिवादीहरुको सहयोगमा राती अन्दाजी ९ बजेको समयमा बारा जिल्लाको परवानीपुर गा।पा।५ बहुअरी टोल स्थित पुर्व–पश्चिम नहरमा धारिलो हतियारले घाटी रेटी मारेका थिए । घटनामामा ना २ ह ११० नं.को ई .रिक्सा प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
प्रहरीका अनुसार मृतक र पक्राउ प्रतिवादी बीचमा व्यवसाय व्यापार तथा केटी सम्बन्धमा व्यक्तिगत रिसईवीको रहेको थियो । जसको कारण उनीहरुले कारण हत्या गरेका हुन् ।
उनीहरुलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सम्मानित बारा जिल्लाबाट म्याद अनुमति लिई हिरासतमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ ।
सात मन्त्रालय पाएको माओबादी तर मन्त्रीका आकांक्षी दोव्बर बढी
मोवाईलको किन्दा सलमानको कार्यक्रमको पास